Emma, ardayga fasalka koowaad ee Dugsiga Hoose ee Bay View, wuxuu u dhow yahay Elaine, oo ah 78-jir maktabadda dugsiga. Dhowaan, Emma Emma's classmate, Denim, waxay lamid tahay Ron, oo ah 66-jir hawlgab ah.
Waa maalin maalinle ah ee Akhriska Pals ee Dugsiga Xeerka, oo ku biira xubno ka tirsan bulshada oo leh caruurta fasalada K-3 si ay u wada akhriyaan inta lagu jiro 30-daqiiqo oo qado ah. Wadaxaajoodka u dhexeeya ardayda iyo saaxiibadooda akhriska sare waa saaxiibtinimo iyo madadaalo, maadaama ay furaan buugaggooda oo ay bilaabaan inay akhriyaan. Waxa bilowday barnaamij tijaabo ah 2013-kii oo ku yaalla beelaha yar yar ee waqooyi-bari Minnesota ee Proctor, Moose Lake, iyo McGregor, oo ay maalgelin ka heshay Northland Foundation, ayaa sanad walba sii waday. Sannadka 2016-2017, Laba Sare iyo Aitkin waxay soo bandhigeen Akhriska Pals ee dugsiyada hoose, sidoo kale.
Akhriska Pals (qayb ka mid ah barnaamijka KIDS PLUS) ayaa ka soo jeeda mudnaanta muddada dheer ee Northland Foundation, oo la wadaago oo si deeqsinimo leh ay taageerto Ururka McKnight Foundation, si kor loogu qaado daryeelka iyo waxbarashada tayada sare leh ee carruurta, dhalashada ilaa fasalka saddexaad. Qaar badan oo ka mid ah caruurta qayb ka ah Reading Pals waxay ku noolyihiin qoysaska dakhligoodu hooseeyo oo aan marwalba la haynin buugaagta la heli karo ama dadka qaangaarka ah ee leh waqtiga ama tamarta si ay ugu akhriyaan iyaga.
"Waxaan ogaanay in dadka waayeelka ah ee waayeelka ah ay leeyihiin sabir iyo wakhti labadaba, taas oo laga yaabo in ay gaabis u tahay waalidiinta mashquulka ah ee xiisa gelinaya khafiifinta," ayuu yiri Lynn Haglin, Madaxa Agaasimaha Northland Foundation / KIDS PLUS Agaasimaha Barnaamijka "Reading Pals".
"Waxaan ogaanay in tabaruceyaasha waawayn ee waayeelka ah ay leeyihiin dulqaad iyo wakhti labadaba, taas oo laga yaabo in ay gaabis u tahay waalidiinta mashquulka ah ee xoojiya khafiifka." -NNN HAGLIN, MADAXWEYNE VICE, NORTHLAND FOUNDATION
Sannadkiiba hal mar, Akhriska Pals wuxuu qabtaa in ka badan 300 oo carruur ah. 40-50 dadka qaangaarka ah oo tabaruce ah, celcelis ahaan, 2-4 saacadood toddobaadkii taasoo ku kordhisa 1,200+ saacadood inta lagu jiro sanad-dugsiyeedka. Macalimiinta ka qayb qaata dugsiga waxay ku talinayaan ardayda u baahan kara caawimaad dheeri ah laakiin aan tayada laheyn Title I. Waxay akhriyaan in Akhriska Pals ay ka caawiyaan ardaydooda inay noqdaan kuwo ku kalsoon akhriyeyaasha, waxay kobcinayaan jacaylka buugta iyo barashada, waxay sare u qaadaan kalsoonida carruurta, iyo iyaga oo dareema inay gaar yihiin.
"Carruurtu waxay rabaan inay ka qayb qaataan; maaha wax xun ee ku jira barnaamijkan, "ayuu yiri Vicki Radzak, oo isku duwaya Reading Pals ee Moose Lake.
Mid ka mid ah qareenka weyn ee waayeelka ah ayaa si wanaagsan u sheegay: "Inaad noqoto Reading Pal ayaa albaabka u furaya marwalba gabay cusub oo cusub, maalgashadeyna waayeelnimadayda waxa aan siin karo dhalinyarada ... fikradaha cusub iyo meelo cusub oo rajo leh oo la socda buug . "